Caasimada Online Isha Wararka Sugan 2017-12-18T00:42:45Z https://www.caasimada.net/feed/atom/ WordPress https://i1.wp.com/www.caasimada.net/wp-content/uploads/2015/07/fav-image-55b02172v1_site_icon.png?fit=32%2C32&ssl=1 Saalax Sabriye http://www.caasimada.net https://www.caasimada.net/?p=285032 2017-12-18T00:42:45Z 2017-12-18T00:20:20Z
Muqdisho (Caasimadda Online) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa rasaas xalay saqda dhexe ka dhacday magaalada Muqdisho, oo dhex martay ciidamada NISA iyo ilaalada siyaasiyiin uu ka mid yahay Cabdiraxmaa Cabdishakuur. Ilaalada hoyga C/raxmaan C/shakuur, ayaa iska caabin xoogan kala hortagey ciidankii soo weeraray, iyadoo labada dhinac uu halkaasi ku dhex maray dagaal hubka […]
The post Xog dheeri ah: Howlgalkii NISA xalay ku weerareen kuna kaxeysteen C/raxmaan C/shakuur appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285030 2017-12-18T00:42:13Z 2017-12-18T00:15:20Z
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan wararkeena hore ku sheegnay Guddoonka BFS iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay haddal kasoo baxay Xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Daahir. Guddoonka iyo Xildhibaanada kulanka qaatay ayaa ku kala aragti duwanaa kulanka ay ka yeesheen arrinta Xeer Ilaaliyaha waxaana haddalkaas taageeray tiro Xildhibaano ah, halka […]
The post Xog: Xildhibaanno durba mooshin ka gudbinaya xeer Ilaaliyaha qaranka appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285023 2017-12-18T00:42:06Z 2017-12-18T00:10:17Z
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa lagu helay kiis la xiriira in dhaqaale iyo Hub ay ku bixin jireen sii jiritaanka Kooxda Daacish oo dunida looga aqoonsaday argagixisada ugu awooda badneyd. Qoraal kasoo baxay Hay’adda baarta hubka culus ee loo yaqaan Conflict Armament Research, oo ay xiganayeen Wargeysyada ayaa waxaa lagu sheegay […]
The post Fadeexad: Mareykanka, Imaaraadka iyo Sacuudiga oo lagu helay kiis argagixiso la jir ah appeared first on Caasimada Online.
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa lagu helay kiis la xiriira in dhaqaale iyo Hub ay ku bixin jireen sii jiritaanka Kooxda Daacish oo dunida looga aqoonsaday argagixisada ugu awooda badneyd.
Qoraal kasoo baxay Hay’adda baarta hubka culus ee loo yaqaan Conflict Armament Research, oo ay xiganayeen Wargeysyada ayaa waxaa lagu sheegay in Imaaraadka iyo Sacuudiga ay Kooxda Daacish u isticmaashay burburinta Syria iyo Ciraaq.
Hay’adda CAR, waxa ay sheegtay in labadaasi dowladood ay Daacish ku bixin jireen dhaqaale iyo Hubka noocyada culus oo loo isticmaalay dagaalada Siiriya iyo Ciraaq.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in meesha ugu badan ee laga keenay Hubka uu yahay Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxaana xusid mudan in Hubkaas 40.000 oo rasaas ah laga soo saaray dhulka Ciraaq iyo Siiriya.
Hubka iyo rasaasta laga soo saaray dhulka ayaa waxaa ku dhagnaa calaamadaha ay isticmaalan ciidamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Kooxda Daacish ayaa la sheegay in inta badan hubka ay ku dagaalamayeen ay ka qabsadeen ciidamada dowladaha Siiriya iyo Ciraaq, halka qeybaha kale ay isugu jireen Yurub, Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Hubka Yurubta oo ay isticmaalayeen Daacishta ayaa la sheegay inay soo gateen oo keenay goobaha dagaalka dalalka Mareykanka, Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Warbixintan ayaa ah midii ugu horeysay oo si dhab ah u cadeenaysa shakigii horey looga qabay in dalalka Maraykanka, Imaaraadka iyo Sacuudiga ay si dadban hubka u siiyaan kooxda Daacish.
Dhinaca kale, arrintan ayaa ka hor imaaneysa sharuucda caalamiga ah ee mamnuucayey in dowladaha hub u diraan goobaha ay ka socdaan dagaalada sokeeye.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285022 2017-12-18T00:41:59Z 2017-12-18T00:05:15Z
Garoowe (Caasimada Online) – Hogaamiyaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa lagu wadaa in mar kale uu kamid noqdo Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Hogaamiyenimo ee Punrland. C/weli Gaas, ayaa xili hore u sii tafa-xeetay waddo waliba oo uu ku heli karo xilka, waxaana xusid mudan inuu garab ka helaayo Dowlada Imaaraadka Carabta oo dhaqaale uruursi […]
The post Xog: Cabdi Weli Gaas oo durba musharax ah iyo dowlad ku taageeraysa appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Caasimada Online https://www.caasimada.net/?p=285039 2017-12-18T00:41:58Z 2017-12-18T00:00:12Z
Dadka ku nool 17ka degmo ee gobolka Banaadir oo hela waxbarasho ay dowladdu damaanad qaaddo oo gaarsiisan heerka dugsiga hoose iyo dugsiga sare waa mid kamid ah howlaha ugu muhiimsan ee maamulka gobolka Banaadir uu ku howlan yahay. Maamulka Gobolka Banaadir oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa daah furay […]
The post Sawirro: Gobolka Banaadir oo waxbarasho lacag la’aan ah siinaya 10 kun oo canug appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285018 2017-12-17T18:30:41Z 2017-12-17T18:26:56Z
Muqdisho (Caasimada Online)-War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in xarunta Villa Hargeysa uu kusoo dhamaaday kulan degdeg ah oo u dhexeeyay Guddoonka BF iyo Xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan isla baarlamaanka. Kulankaan ayaa waxaa looga hadlaayay hadal uu maanta soo saaray Xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Daahir kaa oo lagu dalbaday in baaritaan lagu […]
The post Guddoonka BF & Xildhibaano kulan degdeg ah ka yeeshay Hadalkii Xeer Ilaaliyaha (Xiisad cusub) appeared first on Caasimada Online.
Muqdisho (Caasimada Online)-War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in xarunta Villa Hargeysa uu kusoo dhamaaday kulan degdeg ah oo u dhexeeyay Guddoonka BF iyo Xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan isla baarlamaanka.
Kulankaan ayaa waxaa looga hadlaayay hadal uu maanta soo saaray Xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Daahir kaa oo lagu dalbaday in baaritaan lagu sameeyo laba Xildhibaan oo ka tirsan BFS kuwaa oo lagu eedeeyay Qaran dumis.
Kulanka oo ay banana jog ka ahaayen Wariyayaasha ayaa waxaa diirada lagu saaray haddalka kasoo baxay Xeer ilaaliyaha Qaranka waxa ayna Xildhibaanadu dareen ka muujiyeen hadalka Xeer Ilaaliyaha.
Xildhibaanadu waxa ay sheegen in hadalkaas uu ahaa mid xadgudub ah iyo weerar lagu soo qaaday Baarlamaanka, halka qaarna ay sheegen inay muhiim tahay in baarlamaanka laga dhex saaro Xildhibaankii qas ku haya dalka.
Xildhibaanada oo ku kala aragti duwanaa haddalka Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa waxa ay qaarkood taageeren Xeer ilaaliyaha, halka qaarna ay ka taageeren Xildhibaanada Mucaaradka ee farta lagu fiiqay.
Xildhibaanada garabka siiyay Xil. Xasan Macalin iyo Saabir, ayaa sheegay in hadalka xeer Ilaaliyaha uu gef ku ahaa Xildhibaanada, isla markaana ay doonayan inay kala xisaabtamaan, waxaana ay soo jeediyeen in kalfadhiga Baarlamaanka dib loo furo.
Xildhibaano ka tirsan BFS ayaa sheegaya in laga yaabo xaaladan soo korortay darteed uu Guddoonka Golaha shacabka u soo saaro war saxaafadeed ku aadan jawaabta Xeer Ilaaliyaha iyo dareenkii Xildhibaanada ka muujiyeen.
Dhinaca kale, arrintaan ayaa xiisad ka dhex abuuri doonta Xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa Muxaafidka ah, waxaana suuragal ah in qaabab kale loo rogo arrinkan.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285013 2017-12-17T17:09:06Z 2017-12-17T17:05:46Z
Muqdisho (Caasimada Online)-Xeer ilaaliyaha Qaranka Somaliya Dr Axmed Cali Daahir oo maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay laba Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya in lagu sameynaayo Baaris. Xeer ilaaliyaha ayaa labada Xildhibaan ku eedeeyay inay yihiin Qaran dumis, isla markaana dadaal xoogan ku bixinayaa sida Somalia ay u gali laheyd jawi burbur. […]
The post Akhriso: Qodobada uu xildhibaanka ka tirsan BFS ku weyn karo xubinnimadiisa appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285010 2017-12-17T16:05:51Z 2017-12-17T16:05:09Z
The special counsel probing whether US President Donald Trump’s campaign colluded with Russia has unlawfully received tens of thousands of emails, a lawyer for Trump’s transition alleges, according to US media. In a letter to congressional committees, Kory Langhofer says the General Services Administration (GSA) “unlawfully produced” the private materials, including privileged communications which special […]
The post Donald Trump’s lawyer claims investigator in Russia probe ‘unlawfully’ got emails appeared first on Caasimada Online.
]]> 0 Sahra Xanaan https://www.caasimada.net/?p=285004 2017-12-17T15:58:16Z 2017-12-17T15:56:28Z
Hargeysa (Caasimada Online)-Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliland, ayaa waxaa lagu magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada Somaliland. Wareegtada ayaa waxa ay u qornayd sidan: Xafiiska Madaxweynaha Sum: JSL/XM/WAREEGTO/222-02/122017 Taar:17 December, 2017. Wareegto Madaxweyne Magacaabid. Markaan Arkay: Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, Qodobka 90aad, Faqradiisa 3aad; Xarafka (Kh); Markaan Tixgeliyey: Ahmiyadda ay Hay’adda Duulista […]
The post Muuse Biixi oo magacaabay xilal cusub & Beelo aan weli ku qancin maamulka cusub appeared first on Caasimada Online.
Hargeysa (Caasimada Online)-Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliland, ayaa waxaa lagu magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada Somaliland.
Wareegtada ayaa waxa ay u qornayd sidan:
Sum: JSL/XM/WAREEGTO/222-02/122017 Taar:17 December, 2017.
Wareegto Madaxweyne Magacaabid.
Markaan Sameeyey: Wada-tashi; Waxaan Go’aansaday;
In Duuliye Sare, Cabdi Maxamed Rodol, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada Jamhuuriyadda Somaliland.
Geesta kale, Beelaha qar ee daga Boorama ayaa aad u dhaliilsan magacaabida uu sameeyay Muuse Biixi, taa oo la sheegay inay u janjeerto hal dhinac.
]]> 0 Saalax Sabriye http://www.caasimada.net https://www.caasimada.net/?p=284988 2017-12-17T15:30:14Z 2017-12-17T14:23:14Z
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah Xildhibaanada kasoo horjeedo dowladnimada Soomaaliya ayaa Bartiisa Facebook kusoo qoray hadal aan runtii si weyn ula yaabay sidoo kalana ay la yaabeen intii akhrisatay. Mahad Salaad ayaa soo qoray Farriintaan hoos kaaga muuqato: CAJIIB! Ma Madaxweyne mise…!!! Mudane Madaxweyne Xildhibaan in xasaano laga qaado, lana dacweeyo wado sharci oo […]